Ithegi: imiqondiso ye-37 | Martech Zone
Ithegi: imiqondiso engama-37
Ndicime iAkhawunti yam yaseBasecamp namhlanje
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 7, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kwixesha elidlulileyo, bendi ngumlandeli weempawu ezingama-37. Ndiyakholelwa ukuba babephambi komhla wabo kuyilo lomsebenzisi kunye nokulula. Incwadi yabo, Ukufumana Ngokwenene, isenefuthe kwindlela endiphuhlisa ngayo, ndiyile kwaye ndakhe iimfuno zemveliso. Ndisebenzise iakhawunti ye-Basecamp kwaye ndalandelela ezininzi zeeprojekthi zam kunye nabaxhasi apho ukusukela ngehlobo elidlulileyo. Ngelixa ndifunda i-37 Signals blog kunyaka ophelileyo, ndiye ndaphawula ukuba ithoni